Samsung mandefa ny Galaxy S21 Ultra 5G manerantany | Androidsis
Samsung dia manolotra ny Galaxy S21 Ultra 5G miaraka amin'ny Edge Display ary ny S Pen tsy voatery
Samsung vao nanolotra ny Galaxy S21 ary eo amin'izy ireo dia S21 Ultra 5G izay mitondra ny tsara indrindra ananany ankehitriny hametrahana ny orinasa Koreana Tatsimo. Mba hanasongadinana aloha ny zava-misy fa afaka mampiasa S Pen, toy ny fividianana tsy voatery.
Asongadinay ny S Pen satria tsotra mety ho fialan-tsiny tsara indrindra ho an'ny tompona iray Avy amin'ny fanamarihana teo aloha, azonao atao ny manombatombana ny fividianana an'ity Galaxy S21 Ultra 5G izay manana 120hz eo amin'ny efijery miaraka amin'ireo 6,8 santimetatra ary 1.500 nits ho terminal Samsung miaraka amin'ny famirapiratana avo indrindra mandrak'izao.
1 Galaxy vaovao
2 Miresaka momba ny fakantsary Galaxy S21 Ultra 5G
3 Endri-javatra hafa amin'ny S21 Ultra 5G
4 Famaritana ara-teknika an'ny Samsung Galaxy S21 Ultra
5 Ny vidiny
Mbola sarotra ho antsika ny mahita fialantsiny vitsivitsy hahafahana manova ireo telefaona Samsung teo aloha, satria Mihasarotra kokoa izy io rehefa manana ny Galaxy S10 isika na ny Galaxy Note10 izay mbola mandraka androany dia finday mahavariana roa.
Asongadinay indrindra fa azontsika atao ny mampiasa ny S Pen voalohany amin'ny maodely Galaxy, ary ny efijery izay mampiakatra ny S21 Ultra no ilay famirapiratana avo indrindra natombok'i Samsung androany.
La ny efijery dia manana 6,8 ″ WQHD + AMOLED miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120hz (azo ovaina amin'ny 10 ka hatramin'ny 120hz miankina amin'ny atiny ateraky ny efijery) ary ny tampon'ny famirapiratany misy 1,500nits. Samsung koa dia nilaza fa nanatsara ny tahan'ny fifanoherana 50% raha oharina amin'ireo modely hafa. Hiarovana an'io efijery ananantsika io ny andiany farany an'ny Gorilla Glass miaraka amin'i Victus ary efa hitantsika teo amin'ny Galaxy Note 20 Ultra.
Tokony holazaina fa ity ny maodely ihany no hitazona ilay efijery sisiny, Ka raha efa zatra an'ity karazana tontonana ity ianao dia tsy maintsy misintona ny poketranao hahazoana ilay lafo indrindra.
Miresaka momba ny fakantsary Galaxy S21 Ultra 5G
Azonao atao ny mahita tsara ny famolavolana vaovao ao aorian'ny S21 Ultra 5G misy ny quadruple configurment an'ny fitaratra misy 108MP, 12MP lehibe indrindra ary inona no mety ho masolavitra roa natokana ho an'ny telefaona. Ireo roa ireo dia hamela ny fanamafisana optika 3x sy 10x ary hampiasa teknolojia roa piksela hamaritana sary maranitra miaraka amin'ny zoro rindrambaiko 100x.
Mazava ho azy, ary toy ny nitranga tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny Galaxy vaovao tsirairay dia heverina ho dingana vaovao eo amin'ny sehatry ny sary; Samsung indray mandeha manazava fa ny solomaso 108MP no fialan-tsiny farany tsara indrindra manana ny Galaxy miaraka amin'ny fakantsary tsara indrindra hatramin'izao.
Ny faritra mavitrika amin'ny fakantsary S21 Ultra 5G dia nohatsaraina hatramin'ny intelo ary afaka maka ny horonantsary 4K amin'ny 60 FPS miaraka amin'ireo lantana an-tariby misy anao; ary miresaka momba ny fakantsary eo aloha aza izahay.
Misy endri-javatra vaovao ao amin'ny Rindrambaiko fakantsary S21 Ultra 5G hitarika antsika amin'ny Video Snap, ary tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ny sary azony izany rehefa manoratra amin'ny 8K izahay. Ary rahoviana, ny solomaso rehetra amin'ity finday ity dia manolotra fanohanan'ny firaketana 4K.
Endri-javatra hafa amin'ny S21 Ultra 5G
Ao amin'ny tsinainy dia manana ny S21 Ultra miaraka amin'ny processeur vaovao Exynos 2100 (miandry izany Manaraka ambony ny laharana manaraka miaraka amin'ny onja AMD GPU) izay horaisintsika eto Eropa; raha amin'ny lafiny ilan'ny dobo dia ho hita miaraka amin'i Qualcomm's Snapdragon 888.
Manodidina ny bateria dia manana ny sasany amin'ireo fialantsiny ireo ihany koa isika hiodina amin'ity Galaxy S21 Ultra 5G ity, ary izany dia satria ho afaka handoa 50% ao anatin'ny 30 minitra.
Izahay koa maneho hevitra momba ny hetsika tsara nataon'ny Samsung hampidirina ao amin'ity andalana ity ny fahaizana mahazo S Pen Ary izany dia miaraka amin'ireo fitaovana sy fiasa fantatsika avy amin'ny andian-dahatsoratra Samsung's Note. Mazava ho azy, azontsika atao ny manadino ireo fiasa lavitra izay hita ao amin'ny andiany Note.
Ny fisongadinana iray hafa dia misy ifandraisany amin'ny fifandraisana satria ny Galaxy S21 Ultra no finday avo lenta voalohany ahazoana Wi-Fi 6E miarova vaovao hatrany miaraka amin'ny fenitra fifandraisana tsy misy tariby farany ary mahazoa fifandraisana hatramin'ny in-4 haingana kokoa.
Izy io koa dia manana Sensor UWB hamaha ny varavaran'ny fiara na koa ny fahafaha-mitady zavatra very amin'ny alàlan'ny SmartThings Find; raha mbola misy UWB toy ireo Galaxy Buds na Galaxy Watch.
Famaritana ara-teknika an'ny Samsung Galaxy S21 Ultra
efijery 6.8 "Edge WQHD + Dynamic AMOLED 3200 x 1440 / 515ppi HDR10 + / 120Hz tahan'ny fanavaozana adaptatera / Shieldo an'ny maso.
fitehirizana 128 256 na 512GB
Fakan-tsary aoriana 108MP sakany (f / 1.8 / OIS / PDAF) / 12MP ultra-wide (f / 2.2 / 120 ° FoV / DPAF) / telephoto 10MP 1 (f.2.4 / 3x optika OIS DPAF) / telephoto 10MP 2 (f / 4.9 / 10x sensor Optical / OIS / DPAF) / + AF
Fakan-tsary mialoha 40MP (f / 2.2 80 ° FoV PDAF)
bateria 5.000mAh miaraka amin'ny famahanana tsy misy tariby ary miverina
Software Iray Ui 3.0 miaraka amin'ny Android 11
ny hafa Scanner stereo IP68 mpandefa stereo Dolby Atmos
lafiny 75.6 X 165.1 X 8.9mm
vidin'ny € 1.249 (128GB) € 1.299 (256GB) ary € 1.429 (512GB)
Miaraka amin'ny Samsung Galaxy S21 Ultra manana safidy telo amin'ny fitehirizana isika: 128GB, 256GB ary 512GB. Raha ny marimarina kokoa dia hanana vola mitentina 1.249 1.299, 1.429 ary XNUMX euro izy ireo. Misy loko efatra hisafidianana: Ghost Silver, Ghost Black, Ghost Titanium, Ghost Navy ary Ghost Brown.
Amin'ireo modely telo azo inoana fa ny safidy tsara indrindra dia 256GB, satria tsy misy fahasamihafana firy amin'ny 128GB; fitehirizana iray izay noho ny mety fisian'ny fandraisam-peo an-telefaona an'ity telefaona Samsung vaovao ity dia toa tsy dia kely loatra.
Azo atao izany ataovy ny fitehirizana manomboka anio ka hatramin'ny 28 Janoary ao amin'ny magazay an-tserasera Samsung. Ho an'ny famandrihana dia hahazo ny Galaxy Buds Pro sy ny Galaxy SmartTag miaraka amin'ny fividianana ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung dia manolotra ny Galaxy S21 Ultra 5G miaraka amin'ny Edge Display ary ny S Pen tsy voatery
Samsung dia manolotra ny Galaxy S21 sy S21 + amin'ny efijery fisaka sy ny vidiny antonony kokoa
Samsung Galaxy A32 5G no elanelam-potoana vaovao misy vidiny mirary